URegina Todorenko: kutheni uhambe u-Oryol noRehi, Instagram, umyeni kunye nobomi bomntu namhlanje, isithombe kwi Playboy noMaxim
URegina Todorenko uyintombazana enokubethwa ngokufa kunye nokunyamezela. Lo mntu unokujonga ukukhanya kunye nesisilumko. Uyazi oko akufunayo, oko umbukeli akufunayo, kunye noko abavelisi bakhe bafuna ukukubona. URegina Todorenko ngumzekelo wokulandela kunye nenjongo yokuqwalasela abantu abanobukhwele, namhlanje kwakhona kwiindaba zeendaba. I-biography yomculi ikhula njani? Yintoni eyabangela ukuba "indala" yinkqubo ye "Inkqonkqo neMilala" ukushiya iphrojekthi? Ngaba inkwenkwezi yethelevishini inomfana okanye umyeni? Indlela yokufumana inxaxheba intombazana ephumelelayo. Ukudubula kwi "Playboy" - inyaniso okanye akunjalo?
Kutheni uRegina Todorenko ephuma kwi-Eagle kunye neMisila?
Umshicileli awukhathali ngokubhala malunga nokuhamba kweTtoorenko kwiprojekthi. "Ndaphikisana nabavelisi kwaye ndaxothwa", "wagqiba ekubeni athathe ubomi bentsapho", "ufuna ukunyango olunzulu emva kokuhamba emazweni ahluphekileyo ..." Ukuze ugweme ukuhleba kwingqungquthela yenkomfa, uRegina waphendula, wakhanyisela umbuzo wokushiya waza wanikela wonke umntu kwizicwangciso zakhe ubomi obungakumbi.
Abaninzi baphupha ukuhamba ngehlabathi njengeenkqubo ezikhokelayo "Ukhozi kunye nomsila". Izixeko ezidume kwaye ezingachangekanga kunye namazwe, abantu abaqhelana nabo, iindawo ezingaqhelekanga ... Akukho mbonisi kule projekthi angahlala ixesha elide kuneRina. Le ntombazana enesibindi neyintandokazi iye yabathandana nababukeli beTV.
wenza imisebenzi embi kakhulu:
wadla isiqhamo esimnandi kunye neentlanzi ezinamathanga;
wahamba e-swing phezu kwelasha;
wadutshulwa nge-naked ephahleni lwe-minibus, eqhuba ukuqasha imoto "kwabasweleyo";
Ndazama izibungu ezibosiweyo kunye nezinambuzane, njl njl
Into kuphela awazange avumele ukuyenza yayizama inyama yenja. Ngaba akukona okwenzela ukuba uTolorenko wagxothwa "kwi-Eagle noReka"? Umncedi wafumana abangaphezu kwama-5 abahamba naye kwiprojekthi. Umvuzo wobunzima bomlingani kunye nenjongo ibe yiintsuku ezingenakulibaleka kumabhanku amhlophe kunye namahhotela e-laxtery, kunye nohambo olujikelezayo. Kwaye konke oku - phambi kwezigidi zababukeli. Ngaba akusilo isizathu sokuba nomona?
Ukususela kwimilomo yokuqala malunga "ne-Eagle kunye noMlambo": inyaniso okanye ayikho
Sebenza kwi "Ukhozi kunye noMlambo" - iphupha! URegina waphawula ngentshongwane ejikeleze ukunakekelwa kwakhe.Indawa yexesha leVvinaya isetyenziswe kwiindiza. Ukulala esinqwelweni kunzima kakhulu kwaye akunakukhathazeka. Ngokukhawuleza kokufika kufuneka uqale ukusebenza. Uyayifumana, kodwa yenza ukhathele kakhulu. Ukongezelela, u-Natalie Nevedrova uhamba phambili wabonisa i heroine ukuba yinyanisekileyo ukuvuya kwiidolophu ezintsha, amazwe kunye neziganeko. URegina ukhumbula iinyanga zokuqala aze azifanise nanamhlanje (ezibonakalayo zintlobo) kwaye ezingenakuqhathaniswa ngaphambili. Ngokufanayo njengoNatalie. Inkokheli yangaphambili ye-"I-Eagle kunye ne-Resheks" iyavuma ukuba iguqula iminyaka engama-105, ngenxa yokuba iminyaka yakhe ingabalwa kungekudala, kodwa kwiibill. Iinguqu "ezingabonakaliyo", apho umbukeli uboniswa khona, ibali langaphakathi leprojekthi, akakaze abe ngaphandle kwamahlaya kunye nezidenge zikaRina.
URegina wathatha ukuvakalelwa kwiprojekthi. Akunakumangaliswa nayiphi na into. Yaye kutheni uToyorenko akafuni ukuthatha indawo yomnye umntu. Nangona wam utata, ohlala exhasa umzukulwana wakhe kuyo yonke into, wamnyusa ukuba atshintshe, kwenye yengxoxo yefoni. Ngokuqinisekileyo, indoda endala ifuna ukuba nabazukulu abaninzi. Ngaba abantwana banamathela kwizicwangciso zeenkwenkwezi?
Izicwangciso zekusasa elizayo
Umzukulu onothando wacinga malunga nokuphuhliswa kweemeko zobomi bakhe ngaphandle kweprojekthi. Phakathi kwazo zonke iinketho azikhethele ukuqhubeka esebenza kumabonwakude, ukucula nokufumana umsebenzi omtsha. Ungumntu onobomi obumbeneyo. I-biographie yakhe izele iziganeko eziqaqambileyo, impumelelo kwizifundo ezahlukeneyo. URegina Todorenko uthanda yonke into kunye nayo yonke into: uvuma, ubhala iingoma, iincwadi zeempendulo, wenza umsebenzi wokwakha iimpahla (kwaye uyayithengisa ngempumelelo); iholele i-telecasts ... Kwinkomfa yenkomfa, uRegina wachaza ukuba uceba ukufundiswa eHollywood, kodwa wagxininisa ukuba oku akukaqiniseki. Abantwana baya kufunwa. Eli liya kuba lixesha, ukholelwa uToyorenko.
Ikhasi likaRegina Todorenko kwi-Instagram - ubomi bangebucala kubantu abangabazi
U-Regina usebenzisa i-Instagram ngokunyanisekileyo, exhasa inzala yabalandeli kumntu wakhe. Yaye imfihlelo ayikho kwimimandla emihle, ifom eguqukileyo yomlomo, imilenze emide okanye i-cubes ye-press. Umkhokeli-ntloko we-Eagle kunye noRehi unomdla njengomntu: uluhlu lwakhe lokuzilibazisa lukhulu, kwaye amehlo akhe avule ukunyaniseka okwenene ngobomi, ngendlela engcono kakhulu yegama.
Umndeni Regina Todorenko online
Inzala enkulu ye-Todorenko (inzala ezizukulwana ezi-4) iyimpendulo yangasemva kunye nenkxaso kuRegina. Njengomntwana, abazali bafaka uthando ngentombi yabo kumculo. Kamva, ezinye iimfuno zaqala ukubonakala. Kwi-Instagram, akusiyo yonke ilungu lentsapho elitshintshileyo, kodwa udade-ngokusoloko ebonakala kwisithombe kunye noRegina. Umzala ka-Anya ukhangeleka ngokufanayo nomzala wakhe. Iqhuba abalandeli bebuqhetseba bekhangele iifoto.
URinina Todorenko nodadewabo
Iidenge kunye nococeko kunye noodadewabo kunye noogxa bakhe, iifoto kwi-swimsuits, i-snapshots ukuzonwabisa kunye nezilwanyana ezihlekisayo-intombazana ayinakude ukusabalalisa ubomi bakhe kwi-Instagram tape. Kodwa iifoto kwinethiwekhi zingadlala umdlalo okhohlakeleyo. Le yindlela efanelekileyo yokubonisa.
Umfanekiso weToyorenko ngaphambi nangemva kweeplastiki
Ukuthelekisa iifoto zeminyaka edluleyo "ngokutsha okubhakiweyo," kubonakala ukuba zenziwe ngaphambi nangemva kweeplastiki: impumlo kunye nemilomo inemifanekiso efanelekileyo, xa kuthelekiswa nompompo ongezantsi kunye nomlomo omncinane.
Ifoto nguRegina Todorenko ngaphambi nangemva kweeplastiki
Kwiintliwano-ndlebe zakhe, umsizi we-TV uthetha ngeplastiki ngokungathathi hlangothi. Isifuba siphupha ukunyusa ukususela ebusheni bakhe, kodwa ngoku akafuni ukwenza. Ukulungiswa kwempumlo okanye iimpazamo ezibonakalayo zobuso azibanga ukugwetywa kwentombazana. Ngoko ke, kukho ukusola ukuba yena ngokwakhe akayikuzicekisa ezo ndlela zokuphucula imbonakalo. Kodwa akukho nolwazi olusemthethweni oluvela kwiingcali zeplastiki okanye ezidumileyo, eziza kuqinisekisa iingcamango zeendaba zeendaba. URegina wabelana ngeendlela zokupheka ezilumkileyo, ezazisondeleyo kuphela xa zenziwe ngokuchanekileyo.
URinina Todorenko: ubomi bomntu ngoku (iindaba zakamuva)
Yintoni eyenzeka entliziyweni yenkwenkwezi yeTV, iifili ezona zinomdla kakhulu. Amadoda afuna ukuphupha ngobuhle ukusuka kwizikrini zeTV, kunye nabasetyhini-ukuba bathathe umzekelo wesinqazana esiphumeleleyo, esoloko efezekisa oko kuyifunayo. Kodwa ubomi ngaphesheya kweTV ayikho into endiyithandayo njengoko ndingathanda ukuyikholelwa kuyo.
Umsebenzi wokudala osebenzayo awushiyi ixesha kunye neendawo zobomi bomntu. URegina Todorenko wayenomyeni. Asemthethweni, kodwa ubuhlobo obude obude. Ukungabikho kukaRina kumakhaya kwakha isikhala phakathi kwabantu. Emva kokuthetha ngokuthula njengabahlobo bamandulo, kwaye banquma ukuphelisa ulwalamano lomtshato.
URinina Todorenko kunye nomyeni wakhe wangaphambili
Njengoko uRegina avuma, akanayo ubomi abucala ngoku. Iqabane lakhe lisebenza. Isizathu somsebenzi wakhe oxakekile okanye ukungabikho komlingane ofanelekileyo kunye naye oya kujonga enye indlela ebomini uyaziwa kuye yedwa. Kodwa intombazana ayiyi kuphelelwa yintliziyo: "Yonke into inexesha layo." Kwaye intsapho, kunye nabantwana - yonke into iya kuvela kwiToyorenko.
Emva kokushiya iprojekthi uRegina Todorenko ufumana ubomi, ucobo lwe "Playboy" kunye no "Maxim"
Naked Todorenko wabonakala kumaphepha amaphephancwadi athengisa kakhulu. Ukulahlekelwa ukuthandwa, ukungabi nakubumfihlo okanye ukungabi nemali - eyabangela ukuba udumo luye kwinqanaba elinjalo?
URegina Todorenko kwi-swimsuit, ifoto
Ngokuqinisekileyo, ukuguquka kwenzeke xa ukukhokela kwakufuneka kusebenze ukurenta imoto kwelinye lamazwe apho kuqhutywe khona ukudubula. Wayehamba ehamba eluhlahleni lwe-minivan edibeneyo. Emva kokuhlaziswa okunjalo, ukudubula ngaphantsi kweelensi zabafotoli abanolwazi bamaphephancwadi angcono kunabo bonke. Ubhedu obumhlophe obumhlophe, indawo epholileyo, iingubo zangaphantsi ezincinci okanye iingubo zokugqoka iingubo ... Iifoto ezininzi azibonakali zingagqibekanga kunemifanekiso kwi-swimsuit.
URegina Todorenko unqunu kwiphephancwadi iMaxim, ifoto
Nangona amabele amancinci kunye nobunzima obunzima, umculi kunye nombonisi weTV akayithandabuzi umzimba wakhe kwaye uyawuvula ngokugqithiseleyo ukubonisa izigidi zabafundi beemagazini kunye nabasebenzisi be-intanethi. Bonisa umzimba omhle onamahloni. Ngokwenza kwakhe ubiza ukuba angalandeli imilinganiselo, kodwa ukuguqulwa kweentsilelo kwiimpawu.
Njengomzekelo, intombazana yayisebenza ngaphambili - isebenzisana nenye yezona zinto zithengisa kakhulu. Ubuso bakhe abuyithandi kuphela ikhamera yevidiyo kodwa kunye ne-lens yezithombe.
Indlela uValery Leontiev ayitshintshile ngayo: ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kwiplastiki
Abafazi abathandekayo baseConstantin Khabensky
Ukwabelana ngesondo ngokukhawuleza - ukutshatyalaliswa kobuphi ubudlelwane
Indlela yokusela kakuhle
Iimfihlelo zobuhle kunye nomculo uMichel Mercier
Inkathazo yeminyaka emithathu ekuphuhlisweni komntwana
Ubuso be-Diamond kunye nesikhumba somzimba ukuvelisa
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo we-chrysoprase
Ubuhle kunye nempilo yolusu: izilwanyana zomntu
Umgudu ophilileyo: isiseko sempilo
Ukuhlaziywa kwefilimu "Abaqholi"
I sandwich "Monte Cristo"
Iingxowa zeenkukhu kwijam glaze
Indlela yokutya ngokufanelekileyo ukulahla i-cellulite?